သံလွင်: ဒီမိုကရေစီကို မုန်းတယ်
အမေစု ပြောလျှင်ဖြစ်နိုင်မည်။ အမေစုသည် ကျွန်တော်တို့ လိုလားတောင့်တနေသော အာဏာရှင်တွေကို ဖြုတ်ချ ဒီမိုကရေစီကို တည်ဆောက်နိုင်မည် ဟုထင်မိပါသည်။
ဒါကလည်း ကျွန်တော့်အထင် ကျွန်တော်အမြင်ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တော့ အမေစု သည် အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်ဖြုတ်ချမည်ဟု တခါမှ မပြောဘူးပါ။ ဒီမိုကရေစီကို ရအောင်လုပ်ပေးမည်ဟုလည်း တပါဒမှ မဟ ဖူးပါ။ အမေစုသည် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဒါမျိုးဟု ပြုမူနေထိုင် လုပ်ဆောင်ပြသော မီးရှူးတန်ဆောင် တစင်းသာဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် အမေစု၏ ဂုဏ်ရှိန်၊ပါဝါ နှင့် သူမ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေကို ကြည့်၍ ကျွန်တော်သည် အမေစုအပေါ် အရာရာစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်ဟု ထင်မိခြင်းသည် ကျွန်တော်အတန်းနှင့် စာလျှင် မမှားနိုင်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ တက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ တဆင့်ခြင်းတက်လှမ်းရပေမည်။ မမှားပါ။ အပြောမဟုတ် လက်တွေ့ပြ ရန်သာလိုပါသည်။ ဒီကနေ့ ဒီမိုကရေစီတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အရင်ဆုံး အခြေခံ ဥပဒေကိုပြင်ရပေမည်။ ဒါလည်း မှန်ပေသည်။ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ ဘယ်လိုအချက်တွေလိုသည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ သေချာသည် ကတော့ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုလျင် လွှတ်တော်တွင် အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်မဲပေးရ မည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဒီတော့ ဒီလွှတ်တော်ထဲရောက်နေသော လွှတ်တော်အမတ်အားလုံးသည် စည်းကမ်းအားလုံးကို လိုက်နာ ရပေမည်။ မလိုက်နာလျင် အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိပေမည် မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ကာ အခြေခံဥပဒေသည် အာဏာရှင်အစိုးရ၏ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေဖြစ်နေပေသည်။ ထို့ထက်ပို၍ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း သူတို့၏စိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ၂၅ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း လွှတ်တော်ထဲတွင် ထားရှိထားသည်။
အာဏာရှင်တို့၏ ကျူးပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန် ရှင်းပစ်ရမည်စကားအတိုင်း ရန်သူနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အစိတ်သားတောင်မချန် ရှင်းပစ်ခဲ့ကြသည်ကို ခံစားရခဲ့တဲ့သူတိုင်း သိပေမည်။ ထိုအာဏာရှင်တို့ သည် ကြောက်ရွံ့ရာတွင် အမိဝမ်းတွင်းသန္နေတည်နေသော အစိတ်သားကိုပင်ကြောက်ရွံ့ သည်။ ထို့ထက် မက ထိုအစိတ်သားသည် တနေ့နေ့တွင် ထိုအစိတ်သားသန္နေသားသည် ရှင်သန်ကြီးထွားလာနိုင်သည် ကိုလည်း ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် အာဏာရှင်တို့သည် ထိုစကားအတိုင်း အစိတ်သားဆိုသော သန္နေကို အာဏာရှင်တို့ ရှင်ကျန်ဖို့ လွတ်တော်ထဲတွင် သန္နေတည်နေစေခဲ့သည်။ ထိုအာဏာရှင်လောင်းလျာကို တရားဥပဒေအရ ဘယ်လို ရှင်းထုတ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပညာရှင်များ ပိုနားလည်ကြပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်အနေနှင့်ဆိုလျင်တော့ ဒီကနေ့တိုင်းပြည်အရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် တခြားသူများဆိုသည် အတိုင်း တဆင့်ချင်းသွားလျင် အမှားနည်းနိုင်ပါသည်။ လက်ခံပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရန် မှာ အလွန်နူးညံ့ သိမ်မွေ့နေပေမည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်ယူ၍လုပ်ဆောင်သည်က အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော ခံစားနေရသောပြည်သူတွေ၏မလုံခြုံသောဘ၀ကို လက်ငင်းဆောင်ရွက် ရန်လိုပါသည်။
လက်ငင်းဖြေရှင်းရန်ရှိနေသော ရခိုင်ဒေသရခိုင်ပြည်သူများဘ၀ လုံခြုံရေး၊
ထောင်သောင်းမကအတိဒုက္ခရောက်နေသော ကချင်ပြည်သူများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး။
လယ်လုပ်မှ ထမင်းစားရမည်ဖြစ်သော လယ်သမားများ လယ်ယာများပြန်လည်ရရှိရေး။
တခြား လက်ငင်းလုပ်ဆောင်ရန် အရေးများစွာတို့သည် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် လားလားမျှ မသက် ဆိုင်ပါ။
ထိုလက်ငင်းဆောင်ရွက်စရာကိုပထမဆုံးဆောင်ရွက်၍ ဖြေးဖြေးချင်းဆောင်ရွက်ရမည်ကို ဖြေးဖြေး ဆောင်ရွက် ရပါမည်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တိုင်းပြည်ကြီးချောက်ထဲကျတော့မှာကို လက်ရှိအစိုးရနှင့် လွတ်တော် အဖွဲ့ များ ဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိ၍ (?????)မှ အချိန်မီကယ်တင်ရသောအဖြစ်မျိုး ကျရောက်ပြန်ပါဦး မည်။
ထိုသို့ပြောရခြင်းမှာ ကျွန်တော်သည် သမ္မတကြီးနှင့် (?????)အပေါ် မယုံမကြည်ဖြစ်လွန်းခြင်း၊ သံသယ လွန်ကဲနေခြင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ။
“ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ဆိုသည်မှာ ဖြစ်သည်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်”ဆိုသော စကားကို လက်ခံသော
ရခိုင်ဒေသမှ ရခိုင်ပြည်သူများ ဘယ်နှစ်ယောက်သေသေ၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးမှ တမလွန်ဘ၀ ကို ရောက်ပြီးသောရခိုင်သွေးချင်းများကို ပြင်လည် အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမှာလား။
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို ယခုချက်ချင်း အလိုမရှိပါ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ အသက်ရှင်ရေး၊ အမျိုးဘာသာ မ ပပျောက်ရေးကို ခု ချက်ချင်းလိုပါသည်။
ကချင်ပြည်သူ ပြည်သားများ အသက်ဘေး၊ ဒုက္ခရောက်နေခြင်းများကို အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးမှ စည်းစိမ် ဥစ္စာများစွာကို ပြန်လည် ပေးမှာလား။
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကို ယခုမလိုသေးပါ။ ကချင်တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ဖောက်ပြားနေသော လူအခွင့်အရေးကို အဆုံးသတ်ပေးဖို့ အလိုရှိပါသည်။
လုပ်စားစရာမရှိတော့သည့် လယ်သမားများရဲ့ဘ၀ကို အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးမှ စပါးတွေ တောင်လို ပုံစေ မှာလား။
အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးကို ယခုချက်ခြင်းမလိုသေးပါ။ လယ်သမားများဘ၀ လယ်ယာ လုပ်စားနိုင်ရေး ကိုသာ အလိုရှိပါသည်။
ဒီတော့ကာ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ကို ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ အမေစုကလွဲလို့ တခြားတယောက် မှ ကို မတွေ့တာ။ ဒါကလည်း အမေစုအပေါ် ယုံကြည်နေမိလို့ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်လည်း သိပါတယ်။ အမေစုဟာ ဘုရားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရလည်း မဟုတ်ပါဘူး….အဲ … အစိုးရ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရတော့ဘူး။ အမေစုဟာ လွတ်တော်ထဲမှာ ပါနေတဲ့ အတွက် အစိုးရ တစိတ်တပိုင်းတော့ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
မိသားတစုမှာ သမီးကြီးသည် မိသားစုဘ၀လုံခြုံတိုးတက်ရေးသည်အတွက်လည်း အရေးပါ အရာ ရောက် ပါသည်။ မိခင်၊ဖခင်တို့၏ တခါတရံ လွဲမှားနေမှုများကို သတိတရလမ်းညွန် အသိပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် ထိုသမီးကြီးသည် ထိုမိသား၏လမ်းကောင်းကို မညွန်ပြနိုင်အောင် မိဘတို့က ပိတ်ဆို့ ထားသည် ဆိုပါလျင်တော့ ကျွန်တော်မသိတော့ပါ။
ကျွန်တော်လိုချင်သော မျှော်လင့်သော ခေါင်းဆောင်တယောက်ကို မျှော်လင့်ယုံသာ ရှိပါတောမည်။
ဒီတော့ ဒီကနေ့အရေးတကြီး(ကျွန်တော့်အတွက်သာ လူပြောများနေသော တခြားပြည်သူတွေ အတွက်ပါ) ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဘာလို့ မဆွေးနွေး မတိုင်ပင်ကြနေတာလဲ။ တို့မီး ရှို့မီး လုပ်နေတာ မဟုတ်ရပါဘူး။ တကယ်လိုချင်လို့ ပြောနေရတာပါ။ ပညာရှိတွေ သတိဖြစ်ခဲဆိုတာကို သတိရလို့ ဘယ်သူတွေများ သတိလည်လာမလဲလို့ ပြောခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ အမေစုက လွတ်တော်မှာ ရခိုင်ဒေသအရေးကို အလေးပေး ပြောဆိုမယ်ဆိုရင် အားလုံးက ထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းတပါးသားတို့၏နယ်မဖြစ်သေးခင်၊ ရခိုင်ဒေသမှာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်း ဖက်သမားတွေ မကြီးစိုးသေးခင် လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးသင့်ပါပြီ။
ဒီလိုပါဘဲ ကချင်အရေး၊ လယ်သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ လယ်သမားအရေးတွေကို အရေးပေါ်အနေနဲ့ ဘာလို့ မဆွေးနွေးနိုင်တာပါလဲ။
ပုလဲဆိမ်ကမ်းကို ဂျပန်တွေဗုန်းကြဲတော့ အမေရိကန်အရေးတကြီးအစည်းဝေးတွေခေါ်၊ ဘယ်လိုတုန့်ပြန် မလဲတို့ဆိုတာတွေက ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေတွေလည်း ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေအသာထားအုံး၊ တို့အားလုံးရဲ့ အရေးပေါ် ဂျပန်ကိုဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲ ချက်ခြင်းဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ နှလဘိမ်းတုံး ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးပေါ့။
ရခိုင်သားချင်းတွေအရေး၊ ညီအကိုချင်းဖြစ်နေတဲ့ ကချင်အရေး၊ ကျေးဇူးရှင်တောင်သူလယ်သမားများ အရေးကို လစ်လျူရှုပြီးနေကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။
ဒါဆိုရင် အဲဒီ ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ အရေးတကြီးဆိုတာ လွတ်တော်အတွက် အရေးတကြီး မဟုတ်လို့ လား မသိဘူး။ အခြေခံဥကဒေပြင်ဆင်ဖို့ပဲ ပြောနေတော့ ကျွန်တော်က သံသယတစ်ခု ၀င်လာတယ်ဗျ။
ဘာလို့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ပဲလို့ ပြောနေတာပါလိမ့်ပေါ့။
အာဏာရှင်တွေကလည်း သူတို့နေရာတည်မြဲဖို့ အခြေခံဥပဒေကို သူတို့အသက်ရှင်ရေးအတွက် အခိုင် အမာ ဆွဲထားသည်။ နောက်လွတ်တော်ထဲတွင်လည်း အာဏာရှင် အစိတ်သားသန္နေလေးကိုပါ မျိုးစေ့ချထားသည်။ ဒါမှလည်း အာဏာရှင်တွေ ရှင်သန်နိုင်မှာကိုး။
ဒါကို အမေစုနဲ့ကျန်အဖွဲ့များကလည်း မသိမဟုတ် သိပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့နေရာအတွက် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့သာ တစိုက်မတ်မတ်ပြောဆိုနေပါသည်။ ပြည်သူတွေဆန္ဒနှင့် ဘ၀ကို အလေးမထား။ မိမိနေရာရရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်ဟု ထင်မှတ်မိ နေပါတော့သည်။
ဒါကြောင့် အာဏရှင်တွေကလည်း ဒီမိုကရေစီကိုအကြောင်းပြ အခြေခံဥပဒေအရ မိမိနေရာ ခိုင်မြဲရေးကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အမေစုနှင့် ကျန်အဖွဲ့တွေကလည်း ဒီမိုကရေစီကို အကြောင်းပြ မိမိနေရာရရေး အတွက် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကို လုပ်ဆောင်နေပါတော့သည်။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီအကြောင်းပြခံကြီးကို မုန်းတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နေရာရရေးသာ အာရုံခံစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်လည်း တခြားအကြောင်းပြစရာတွေ ရှိနေအုံးမှာပါ။
ကျွန်တော်လည်း အားအားရှိ ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အမေစုပြောသလိုပေါ့ဗျာ။ အိမ်မှာထမင်းချက်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတောင် ထမင်းချက်နေခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ လုပ်ဆောင်နေခြင်းပါတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် သဲတမှုန်ပေါ့ ဒီစာရေးခြင်း ကလေ။ ကျွန်တော်ထင်တာ မှားနိုင်ပါသည်၊ မှန်လည်း မှန်နိုင်ပါသည်။ အချိန်က အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ ပညာရှိတွေက အချိန်ကို လိုအပ်မည် မထင်ပါ။ ပြေးမကြည့်ဘဲ တွေးကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ မှန်သည် မှားသည်ကို သိနိုင်ပါသည်။
at 10/17/2012 05:08:00 PM